Dacwad uu xee-ilaaliye ka ahaa eedeeysane - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dacwad uu xee-ilaaliye ka ahaa eedeeysane
La daabacay onsdag 2 mars 2016 kl 09.21
Xeer-ilaaliye xabsiga ugu jira xukun la xiriira kufsi iyo fara-xumeeyn uu dhallaan u geeystay oo wax ka qaaday dacwooyin maxkamad ka dhacey.
Dacwadahaasina oo salka ku hayay falal fara-xumeeyn ee dhallaan loo geeystay iyo sawirro iyaga oo qaawan lagu daabacay aaladda internet-ka, sida ku cad baaritaan ay ammuurtaa ku sameeysay laanta wararka ee idaacadda Ekot.
Hase yeeshee uu sheegay madaxii xeer-ilaaliyaha, Patrik Säflund, in aannu dacwado muhiim ah aannu xeer-ilaaliyaha xabsiga ku jiraa ka qaadin maxkamadda.
- Kama aannu qayb qaadan dacwado noocyadaa ah, muddadii aan halkan joogay, sida uu sheegay Patrik Säflund. Isagoona dabadeed ka shaleeyay oo sheegay in xeer-ilaaliyaha xabsiga ku jiraa uu qayb ka ahaa dacwooyin arrimmahaa la xiriira ee dareen dhalin karay.
Baaritaanka ay laanta wararka Ekot ku sameeysay falalkaa ayey ka soo baxeen sidoo kale in ciidanka boliiska ee baarista ku hayay faylka hablaha lagu soo ban-dhigey oogadooda ey ka daaheen iney codsadaan summaddii kombiyuuterka laga soo dhigay sawirradaa internet-ka, halkaasina laga ogaan kari lahaa cidda ka dambeeysay, dabadeedna aaney dib u raacin.
Halka uu xeer-ilaaliyaha lagu xukumay kufsiga iyo fara-xumeeynta dhallaanka oo dacwadahaa qayb ka ahaa uu hoos u dhigay dhammaan dacwadihii laga soo oogay faylalkii Hudikmappen.
Hase yeeshee annu madaxa laanta xeer-ilaaliyeyaasha ee degmada Gävle Patrik Säflund aannu ka welwelsanayn inuu khalad ka dhacay maxkammadihii dacwooyinkaa lagu qaadayey:
- Haddii ay cid ula muuqato inuu khalad ka dhacay, waxaa jira nidaam saamaxaya in go’aanka dib looga dacwoodo sidii dib u eegis loogu sameeyn lahaa.